Zilandwe ekhweni izinkomo zelobolo 'ezebiwe' - Ilanga News
Home Izindaba Zilandwe ekhweni izinkomo zelobolo ‘ezebiwe’
Kuthiwa okuthuse abasekhweni wukufika kwabakhongi ebusuku bekhala ngenkinga yemoto
ZIPHUME seziqhutshwa ngamaphoyisa izinkomo obekulotsholwe ngazo emzini wakwaDlame, KwaNongoma emuva
kokutholakala ukuthi bezebiwe.
ZIPHUME esibayeni seziqhutshwa ngamaphoyisa izinkomo obekulotsholwe ngazo izintokazi zandawonye KwaNongoma emuva kokuba kutholakale ukuthi empeleni amabheka lawa, abentshontshiwe.
ILANGA lithole ukuthi insizwa yakwaKhanyile nomzala wayo onguMnu Hlela ILANGA elizame kaningana ukuthola amagama azo, nazo uqobo kodwa kwangalunga, ziphoxekile ngoLwesine kugasela amaphoyisa eyolanda amabheka ebezilobole ngawo emndenini wakwaDlame, agcine ebuyiselwe kumnikazi wawo.
ILANGA lithole ukuthi lezi zinsizwa zithole ulwazi ngezinkomo ezishibhile okuthiwa zigcinwa ndawana thile KwaCeza, eMahlabathini, zazithenga. Kuthiwa insizwa yakwaHlela okuyiyona ebixhumana nomsolwa odayise izinkomo, ixoxele umzala wayo ukuthi zibuthwa phansi kule ndawo, kungakuhle banikele khona njengoba bezimisele ngokulobola.
Kuthiwa bathenge eziwu-5, okutholakale ukuthi zonke bezebiwe. ILANGA lithole ukuthi uHlela nguyena olobole kuqala, kwadlula isonto nomzala wakhe wathumela abakhongi.
Kuthiwa okuthuse abasekhweni wukuthi izinkomo zikaMnu Khanyile zifike ebusuku, abakhongi bakhala ngokuthi bebenenkinga behlushwa yimoto.
Umnikazi wezinkomo ebezebiwe, uNkk Khombisile Mazibuko, uthe ubekhona ngesikhathi amaphoyisa eyozilanda kwaDlame. Uthi ubenezinkomo eziwu-7, zashaqwa emadlelweni ekuqaleni kukaNhlangulana (June).
“Ngifonelwe ngamaphoyisa engitshela ukuthi izinkomo zami eziwu-4 zitholakale KwaNongoma sekulotsholwe ngazo. Amasela azeba kangiwazi ukuthi ngawakuphi kanjalo nabakhwenyana abathumele abakhongi kwaDlame kangibazi.
“ngijabulele ukuthi ngizitholile izinkomo zami ngoba besengilahle ithemba njengoba ukwebiwa kwemfuyo kudlangile la endaweni yethu.
“Nakho nje ukuthi ngigcine ngizitholile, ngisizwe wukuthi bezinomaka engazibeka wona,” kusho uNkk Mazibuko.
ILANGA lishayele iNkosi Falethu Zungu eMahlabathini, eveze ukuthi ibisiluzwile udaba kodwa ibingakayitholi imininingwane ephelele ngokwenzekile.
“Ngilindele ukuthi udaba luzokwethulwa kimina namhlanje ngoba sizohlangana,” kusho iNkosi Zungu.
IBambabukhosi laseMatheni, KwaNongoma, uPrecious Zulu, lithe:
“Ngiluzwile udaba lokulandwa kwezinkomo kwaDlame, kodwa kanginayo imininingwane egcwele ngalo. Ngithole ukuthi induna ibikeliwe ngalo.”
Imizamo yeLANGA yokuthola induna yendawo iphunzile njengoba ucingo lwayo belungangeni. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, usiqinisekisile lesi sigameko, wathi kuboshwe abasolwa ababili okulindeleke ukuba bavele enkantolo khona maduze ngecala lokwebiwa kwezinkomo.
Previous articleUKhuzani uzovela emdlalweni iMbewu
Next articleWathunjwa esemhhumeni ngeSoweto Derby